Faa’iidada wax aqriska u leeyahay Bulshada. |
Aqoon GuudArrimaha Qoyska & Horumarinta BulshadaGanacsiga iyo DunidaHorumarka & Deegaanka ---OLDMaqal & Muuqaal Arrimaha Bulshada
Tuke Somalism — February 10, 2016
Aqrinta faa’iidadeeda ma ahan mid dhowr sadar ama qormo lagu soo koobi karo balse waxaa jecleestay inaa xoogaa ka iftiimiyo. Diinteena Islaamka waxa ay faa’iidooyin fara badan siisay wax aqrinta, Nabigeena Muxamed NNKH suuradii ugu horeysay oo qur’aan ah oo Allah SWT kusoo dajiyo waxa ay ahayd IQRA oo micnaheedu yahay aqri! Taasi ayaaba noogu filan faa’iidada ay leedahay wax aqrinta.
Soomaalida hadii aynu eegno waxaan oran karnaa ma ahan dad wax aqriya, markaan dhahayo ma ahan dad wax aqriya micnaheedu ma ahan in aysan wax higaadi Karin ee waa in aysan dooqoodu ahayn amaba aysan jecleen in ay wax aqriyaan.
Marki aan eegno dunidaan aan guudkeeda saaranahay ummada ku nool midba mida ay ka aqris badan tahay waa ay ka il baxsantahay kana barwaaqo badantahay maxaa yeele marki aad wax aqriso waxaad heleysaa faa’iidooyin aadan horey u heesanin.
Dadka qaar ayaa ku dhahaya waqri uma haayo wax aqriska oo mashquulkeyga ayaa saa’id ah dadkaasi waxaan dhihi lahaa waad heesaan waqti waliba waqti badan ayaad u heli kartaan, ma is weydiisay immisa saacadood ayaa habeenkii iyo maalintii si micno darro ah kugu dhaafa?
Immisa saacadood ayaa ku qasaarisaa baska ama tareenka marki aad u sii socotid schoolka ama shaqada?
Immisa saacadood ayaad ku qasaarisaa sheeko iyo maaweelo? Miyaadan awoodin waqtiyadaas badan waqti yar oo ka mid ah in aad uga faa’iideesato wax xiiso kuu leh oo aad aqriso?
Waan ogahay in ay dhib kugu tahay laakiin waa marka ugu horeyso oo waad la qabsan doontaa , waad ka heli doontaa wax aqriska waxbadan oo kaa maqnaa, isku day in aad dhisto aqoontaada iyo maskaxdaada kuna dhisto wax aqriska, ugu danbeentii waxaa idinkula dardaarmayaa in aad kordhisaan wax aqriska.
Next post Yaa wuxuun cuna oon waxbaba qaban.
Previous post Qiimaha Ay Leeyihiin Dumarka Soomaaliyeed ||Tukesomalism.com